Indawo yokuhlala yaseKhaya yaseKandoofa
Ifumaneka eMeemu Atoll, ungasifumana isiqithi esingafunyaniswanga iMulah. Ilali yaseKandoofa iya kukunika intuthuzelo ngexesha lakho leholide yaseMulah. Indlu yeendwendwe egqibeleleyo yeyona ndawo igqibeleleyo- kunye namava enkcubeko yaseMaldivian.
Igumbi ngalinye kule ndlu yokulala mi-5 linegumbi lokuhlambela labucala kunye neshawari, i-air conditioning, iTV enescreen esicaba kunye nemicrowave. Ihlathi kunye neelwandle zabucala ziya kukunika imvakalelo ekude kumava akho okugqibela eMaldives.
Indlu entle yasekhaya, esembindini eseMulah. Indlu yokulala ye-5 yokulala ibonelela ngayo yonke intuthuzelo oyifunayo ngexesha lakho leholide. Ucoceko lumgangatho ophezulu eKandoofa Village. Kukho igadi entle, enejingi emangalisayo yaseMaldivian kwaye ngaphakathi ungasebenzisa igumbi lokuhlala kunye nekhitshi.
Ilali yaseKandoofa ikwisitrato esikhulu eMulah, kufutshane nolwandle lwaseMulah kwaye kufutshane nehlathi. I-Mulah sisiqithi esithe qelele kwaye esingekafunyaniswa sesona siganeko sibalulekileyo sasekhaya kunye nenkcubeko.
Umnini wendlu yeendwendwe uya kuhlala ekhona ngalo lonke ixesha, inkosikazi yakhe iya kukupheka ukutya okumnandi kwaye isikhokelo semidlalo yamanzi siyakuvuyela ukukuthatha kuhambo kunye nohambo!